Sakafo Thai ~ Journey-Assist - lasantsy nasionaly. Ny tena matsiro
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Sakafo Thai
Misongadina sakafo sakafo Thai
Mahaliana ary mahasoa ho fantatra.
Manompo. Endri-panompoana lovia
Lovia nasionaly lehibe (sakafo nentim-paharazana)
Mamy sy tsindry any Thailand
Sakafo miavaka (bibikely)
Ny fahandro Thai dia anisan'ireo malaza indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ny gourmet tsirairay dia maniry ny hanandrana ny lovany.
Tamin'ny ankapobeny, ny sakafo nasionaly any Thailand dia nitaona ny tsindry any Chine, India, Japon ary ireo firenena Eropeana tandrefana. Noho izany, miverina amin'ny taonjato faha-17. Ny misionera avy any Portugal dia nitondra dipoavatra chili, izay ankehitriny no iray amin'ireo zava-manitra Thai malaza indrindra.
Anisan'ny mampiavaka ny fahandro Thai dia ny resa maligno ho an'ny lovia maro. Ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana ny eo an-toerana, na dia ny kilasy avo indrindra aza, dia mifantina matetika ny fangaro "amin'ny maso". Ny fiantohana lehibe indrindra ny tsirony tsara amin'ny lovia, raha ny heviny dia tena tsara fifandanjana amin'ireo tsiro dimy rehetra: mamy, mangidy, masira, manitra, mamy! 🙂
Mahaliana sy mahasoa ho fantatra!
Sopapa any thailand
Ao Thailandy, lasopy foana ny lasopy, ary tsy alohan'ny mafana, fa miaraka amin'ireo lovia rehetra. Eo amin'ny latabatra amin'ny andrim-panjakana Thai na makashnitsa dia misy fotoam-pahavitrihana sy saosy izay ampiana amin'ny hena na hena, izay manome tsiro hafahafa, ary miaraka amin'izany dia fanoloana sira.
Ny teny lavaka amin'ny sakafo Thai dia midika hoe salady, adika ara-bakiteny hoe "mifangaro". Nasiana paiso dipoavatra, ranom-boasary, ahitra maina, tongolobe maintso, hazan-tany na hena, atody, voanjo, voankazo Phad Thai sy Ta Krai, ahitra manopy mavo sy mason-tsoavaly fantatra amin'ny anarana hoe voasarimakirana sorghum.
Ny ankamaroan'ny salady dia misy tsiro kely. Raha manontany ianao hoe "Fantaro ny mavokely" dia hahalala anao izy ireo ary hampamora ny salady amin'ny heviny, na dia hisy paiso aza eo. Ny ankamaroan'ny akora dia voahosihosy sy afangaro amin'ny tranobe lehibe mba hanomezana ranom-boankazo. Voasarona eo ny rindrina, ary avy eo amin'ny rindrina no iafarany, ao anaty saosy.
Ny vary ao Thailandy
Ny vary any Thailandy dia ampiasaina fa tsy mofo miaraka amin'ny salady, lasopy ary hena. Na ho toy ny lovia mahaleo tena. Vitsy ny olona mahalala fa Thailand dia mpitarika eran'izao tontolo izao amin'ny famokarana vary mora vidy. Ary mahazo tombony bebe kokoa momba izany izy fa tsy amin'ny fizahan-tany.
Rehefa mividy vary ao amin'ny fivarotana lehibe ianao dia homena karazany dimampolo sy dimampolo. Izany no iray amin'ireo antony nahatonga ny vary vary fahandroana an-tsaha na matsiro.
Misy karazan-katsaka marobe amin'ny sakafo Thai, tena kalitao ary tsy ambany noho ny italianina .. Ao amin'ireo vilia Thai dia afaka manandrana mofomamy amin'ny endriny isan-karazany, halavany ary sakanany: tena manify, tsy tapaka, mivelatra ary misy kianja mihitsy aza.
Karazan-tsakafo rehetra, henan-kisoa sy akoho no tena ampiasaina amin'ny sakafo Thai. ary hen'omby tsy dia mahazatra noho ny finoana ara-pivavahan'ny Thais shinoa.
Endri-panompoana lovia any Thailand. nametraka
Tian'ireo vahoaka Thailandey ny manisy lovia amin'ny fomba matotra. Ny mpahandro mifono tena dia tsy hamela ny manja lovia raha tsy eo ny fanompoana mahafinaritra azy. Ho an'izany, ny sokitra amin'ny legioma, ohatra, dia azo ampiasaina. Ny legioma dia arotsaka foana ao amin'ny salady, ary ny singa manompo fanampiny dia ampiasaina amin'ny lovia hena.
Ny lovia nasionaly ao Thailand
Ny fahandro Thai dia manana resabe be dia be. Mba hanandrana azy rehetra dia tokony hitsidika an'i Thailand mihitsy ianao, na dia any amin'ny firenena manerantany isan-taona aza dia mihamaro hatrany ny trano fisakafoanana manampahaizana manokana misokatra amin'ny sakafo Thai. Na izany aza, voafetra ihany ny atiny. Noho izany, ny fitsidihan'ny sakafo marina dia mitsidika an'i Thailand mba hankafy ny lovia eo an-toerana.
Salady any Thailandy
Ny salady dia singa manan-danja amin'ny sakafo Thai. Ny fomba fanoloran-tenany dia tena tsotra ary mora tadidina. Angamba ny Somà salady Thai malaza indrindra dia ny Som Tam. Ahitana singa miisa 10 mahery, anisan'izany - saosy trondro, voanjo, voanio. Misaotra ny tsiro tany am-boalohany miaraka amin'ny mahay mandanjalanja ny asidra, ny sira, ny mamy sy ny manitra, i Som Tam dia lasa iray amin'ireo lovia malaza Thailandey.
Salady Thai Tom San
Salady (Pad Pak Bung Fai Daeng) Pad Pak Bang Fai Daeng.
Salady mahaliana hafa avy amin'ny sakafo nasionaly Thailandey dia i Pad Pak Bung Fai Daeng. Mba hanomanana izany dia alaina ny saosy, izay ananana legioma, zava-maniry sy voninahitra ny maraina dia atody miaraka amin'ny vozolan-javaky amam-borona ary misy akoho kely. Atody mafana io salady io.
Sup Tom Tom
Tena be mpitia any ivelan'i Thailand no nahazo lasopy Tom Yam.
Io fanavahana ny nanaovana ny ranon-dronono daholo ny akora rehetra. Voankazo voatabia, hipon, galangal, holatra, voasarimakirana ary ravinkazo. Tom Yam dia azo atiana ao na tsy misy ronono. Noho izany antony izany, misy karazany 2 amin'ity lasopy ity dia manavaka: Nam Kom (miaraka amin'ny ronono) ary Nam Sai (tsy misy ronono).
Ao amin'ny sakafo Thai dia misy atody zato mahery amin'ny saka-kena. Ny malaza amin'izy ireo dia azo antsoina hoe Panang Gai.
Sakafo hena ao Panang Gai
Akoho iray izay andrahoina ao anaty kari ary andrahoina menaka voanio. Somary mamelombelona ny ravina voankazo izany ny tendan'ity lovia ity. Noho ny fifandanjan'ny zava-manitra sy asidra tany, Panang Gai dia mivoaka avy amin'ny sisa amin'ny lovia.
Lovia Thai hafa izay ilaina manokana:
Nosoratan'i Pia Sod - omelet miaraka amin'ny legioma, saosisy sy horonana.
Mi Krop - mihosom-bary matavy miaraka amin'ny saosy.
Yum Nua - hena nendasina niaraka tamin'ny kôkômbra, tongolobe, dipoavatra ary ranom-boasary makirana.
Larb Guy - akoho misy ranom-boasary makirana sy tongolo ary dipoavatra.
Pad Thai - kobam-bary nasiana saosy misy atody, atody, tsaramaso ary tongolo maitso.
Ny mofomamy sy ny voankazo dia tsindrin-tsakafo malaza any Thailand. Be dia be ny Thai no tena tia mankafy pancakes miaraka amin'ny famenoana akondro.
Amin'ny ankapobeny, ny olona Thailandey kosa dia tsy tia zava-mamy, noho izany antony izany dia tsy afaka mirehareha latabatra mamy betsaka ny sakafo Thai. Ny atody, akondro, voanio sy vary dia ampiasaina mba hanaovana ny fangaro, izay no fototry ny karazan-tsaka, pies ary gilasy hafa izay tsy tian'ny vahiny matetika.
Ireo fanamarihana eto dia i Pho Thong - meringue amin'ny endrika baolina, izay nentina teto amin'ity firenena ity raha vao 17 sotrokely. Portogey, ary Khan Luuk Chup - voanio voanio miaraka amin'ny gazoala, izay mitovitovy amin'ny marzipan; baolina dia vita avy amin'ity puree ity, izay manome ny endrika ivelany ireo voankazo samihafa.
Mamatonalina ao Mango
Ilay lovam-bary tena fanta-daza dia Mango Sticky Rice, izay vary amam-bary dia misy voankazo manga, voatoto miaraka amin'ny ronono mamy, voanjo na voa.
Sakafo hafahafa any Thailandy (bibikely mavo)
Manalavitra ny firenena Aziatika rehetra ianao dia afaka manandrana lovia any ivelany toy ny akoho, valala, valala, maingoka.
Bibikely voajinja tany Thailand
Na izany aza, any Thailandy izany rehetra izany dia mihoatra ny ampy. Na izany aza, ny bibikely maintso dia tsy amidy amin'ny dingana rehetra. Na eo aza izany, amin'ny alàlan'ny fikarohana manokana, dia ho hitanao izany rehetra izany. Voalohany indrindra dia mila mandeha any amin'ny bazary ianao. Ao, ny bibikely dia atody ao anaty menaka mangotraka eo imason'ny olona rehetra (na izany aza, matetika azo atao ny mividy azy ireo amin'ny fitoeram-bary sy efa vonona), mametraka azy ireo ao anaty harona plastika na taratasy, afangaro amin'ny sira, saosy, zava-manitra ary ravina manitra lozatra.
Raha resaka tsirony dia tsy zavatra manokana izany ary zavatra masira sy crispy fotsiny.
Fonosana kely 1 afaka amidy amin'ny 20 baht.
(Sary iray feno momba ny voankazo any Thailand eto)
Any Thailandy, saika ny voankazo rehetra no misy, manomboka amin'ny paoma efa zatra antsika, miafara amin'ny miavaka any ivelany - ny mangosteen, durian, sns. Ireo voankazo tsy fahita firy indrindra avy amin'ireo maniry any Afrika sy Amerika Atsimo no tsy amidy eto.
Na izany aza, miaraka amin'izany, paoma, voaloboka, paiso, na paiso efa zatra eto amintsika dia lafo be eto. Raha ny tena izy, matetika dia nentina avy lavitra izy ireo na maniry ao amin'ny faritry ny faritra mangatsiatsiaka indrindra any Thailand, satria tsy afaka miaina ao anatin'ny toetrandro tropikaly be loatra izy ireo.
Mandritra izany fotoana izany, ny voaniho, manga, dureni, lychees, mangosteen, rambutans, carambola, longans, papaya, jackfruits sy ny maro hafa dia amidy betsaka. sns. Ny vidin'ny mango 1 kg dia mety ho 20 baht. Ny vidin'ny kesika, voanio vaovao na pomelo lehibe dia mety hitovy. Tokony ho tsaroana fa ny voankazo hafakely eto dia azo amidy mora tsy vidy mandritra ny taona, satria samy manana ny fotoany avy ireo voankazo tsirairay ireo.
Sakafo an-dalana any Thailand
Makashnitsy ao Thailandy (varotra an-dalambe)
Amin'ny sarety (izay mpizahatany avy any amin'ireo firenena miteny Rosiana no nantsoina hoe "shippers") dia nahandro zavatra matsiro isan-karazany ny mpivarotra amoron-dàlana Thai. Tsy tokony ho saro-kenatra hihinana ireo lovia ireo ianao eny an-dalana, satria any Thailandy izany no fanao.
Lovia "arabe" malaza indrindra:
Sate - kebabs kely misy hena isan-karazany, ary koa ny hazan-dranomasina.
Sate. Mpikotr'akoho na henan-kisoa. Thailand
Pad Thai - paty nendasina miaraka amin'ny voanjo, mony, tsaramaso ary hena.
Pad Thai. Mofom-bary.
Zava-boankazo sy voankazo vaovao. Hanao ny tsara aminao.
Smoothies sy vaovao any Thailandy
Pancakes namboarina tamin'ny akondro, anana sy ny ronono condens.
Pancakes (crepes) miaraka amin'ny akondro na anana ao Thailand
Fananganana kafe (kafe, trano fisakafoanana)
Mcdonalds any Thailand
Ho fanampin'ny sakafo Thai, ny kafe ao an-toerana koa dia manana lovia eoropeana. Ao an-tanànan'i Thailand dia maro ny pizzerias, ny trano fisakafoanana an'ny sakafo eoropeana ary ny sakafo haingana malaza eran-tany (McDonalds, Burger King, KFC).
Mahita safidy hafa ireo mpizaha tany izay tsy tia sakafo Thai:
Eo amin'ny toeram-pivarotana lehibe izay misy toeram-pivarotana. Ohatra, ao amin'ny tambajotra Central Festival any Koh Samui, Phuket ary Pattaya.
Fitsarana sakafo any Thailand
Eto amin'ity firenena ity, misy koa ny andrim-panjakan'i Rosiana, izay eo amin'ny arabe malaza indrindra amin'ny mpizaha tany. Eken'ireo famantarana famantarana rosiana izy ireo.
Ny olon-tiany ao anaty dessert dia afaka mampihena avy amin'i Swensen's. Ity tambajotra ity dia misolo tena amin'ny fivarotana rehetra any Thailand.
(Ice cream cafe) any Swensen any Thailand
Nasaina mividy vokatra any amin'ny tsenambarotra Big C, Makro, Tesco Lotus.